Sahitya – Page6– सकारात्मक परिवर्तनवाहक विचार, कला/साहित्य र सत्य खवरको बाटाे
जेलभित्र मेरा साथी
५ अप्रिल सन् १९७१ को कुरा हो । बन्दीहरु अरु बेला झैं उपवास बसेका थिए । आज कुराकानी र भेटघाटको दिन पनि थियो । कल्पना र मैले गाउँले तरिकाबाट खाना बनाउने अभ्यास गरेका थियौं । सबेरै म अगेनुको छेउँमा तहतह पारेर राखिएको कम्बलमाथि बसेर मटरदानाको पुआ बनाइरहेकी थिए । यो पुरुष बन्दी साथीहरुकहाँ लिएर जानु […]
Posted in: Jiwan saili, mainNews, Sahitya, फ्लयास ब्याक
‘मौसुफ’हर्को बर्थ डे
उतिबेलाका पञ्चप्रेतहर्को साशन सत्तामा ‘मौसुफ’हर्को बर्थ डे धुमधडकासित मनाइन्थ्यो । पिचास ‘मौसुफ’हर्को मनाउँदा जयन्ती भन्थे, जिवित ‘मौसुफ’हर्को मनाउँदा जन्मोत्सव भन्थे । नेपाल मण्डलका पचहत्तरै जिल्लाका अड्डाखाना भएका सहरमा जुलुस झाँकी सहित ‘मौसुफ’हर्को जन्मदिन मनाउने चलन थ्यो । जुलुस झाँकीमा ‘मौसुफ’को जयजयगान हुन्थ्यो । ‘मौसुफ’हर्को नाउँमा रचिएका भजनहरूले आकास धर्ती गुञ्जायमान हुन्थे । भञ्ज्याङमा ‘मौसुफ’ भेटिन्थे […]
झर्रोटर्रो : निर्मलाको लेखौटो
म निर्मला पन्त । म मरेको आज १३६ दिन पुग्यो । मलाई बलात्कार गरेर हत्या गरेको घटनाले देशै तताएको छ । यतिका दिन वितिसक्दा पनि अपराधी पत्ता लाग्न सकेका छैनन् । सायद मलाई बलात्कार गरेर हत्या गर्नेहरू सत्ताग्रहबाट आएका एलियन पो हुन् कि ? सत्ताग्रहबाट आएर मलाई बलात्कार गरिवरि हत्या गरेर उतै पो फर्के […]
Posted in: २०७४–चुनाव, Sahitya, Tippani Bislesion
झर्रोटर्रो : नयाँ जुग
यतिखेर नेपाल मण्डलमा नयाँ जुगको सुभारम्भ भएको छ । अर्थात् पुरानो जुग सकिएको छ । अब एक्काइसौँ सताब्दी सकिएर बाइसौँ सताब्दीको सुरुआत भयो । अर्थात् पञ्चाङ्ग पात्रो अनुसार कलेर्गताब्दा यानेकि कलिजुग सकियो । दलिजुग यानेकि दलालजुगको आरम्भ भयो । यसलाई पञ्चाङ्गको भाषामा देलेर्गताब्दा भन्नु पर्ने हुन्छ । यो कुराको घोषणा नेपाल सरकारका पर्धानमन्तरी मिस्टर उखानप्रसादले […]
Posted in: २०७४–चुनाव, Bichar, Sahitya, Tippani Bislesion
भो चाहिएन तिम्रो सत्ता
भो चाहिएन तिम्रो सत्ता यो, देखियो देखायौं नाङ्गै । टोपीले छोप्दा नदेखिए पनि डोकाले छोप्दा ल्याङफ्याङ्गै ।। रेल र तेलका कुरा धेरै ग¥यौं, पानी जहाज तिम्रो कहाँ गयो । सुन तस्कर, ठेकेदार र सिण्डिकेटबाट तिम्रो कमाई कति भयो ।। बालखैमा निमोठिएकी निर्मलालाई न्याय माग्दा पीडितहरु बौलाउनु पर्ने ।।। ‘हत्यारालाई कारबाही गर’ भन्दै देशैभरि आन्दोलन फैलाउनु […]
Posted in: २०७४–चुनाव, Sahitya
मार्क्सवादी कलाचिन्तनको भौतिकवादी पद्धति र मूल मर्म
विषय प्रवेश कलाको विकास भएपछि कलाचिन्तनको प्रक्रिया पनि आरम्भ भयो । कलाभन्दा पनि कलाचिन्तनचाहिँ दर्शनसँग जोडिएर विकसित भएको छ । वास्तवमा कलाचिन्तनको आधार दर्शन रहँदै आएको छ । दर्शनका फलकमा उभिएरै कलासम्बन्धी चिन्तनले आकार ग्रहण गरेको देखिन्छ ।मार्क्सवादी कलाचिन्तन भौतिकवादी अझ द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी दर्शनमा आधारित कलाचिन्तन हो भने उत्तर आधुनिकतावादी कलाचिन्तन नयाँ प्रकारको आदर्शवादी विधेयवादी […]
Posted in: २०७४–चुनाव, mainNews, Sahitya
बाजी थाप्न, मार्न कसैले बाज्या थाप्छन् कसैले अजी थाप्छन् बाज्या र अजी हाल्ने उखान मात्र रहेछ कसैले बाजी हाल्छन् जित्नका लागि, कसैले बाजी हाल्छन् हार्नका लागि, बाजी हाल्दा हारजित भैहाल्छ हैसियत नभएकाले के बाजी मार्नु हैसियत भएकाले बाजी मारिहाल्छ बाजीमा त्रासहुँदा पीडा भएन गाँस छुट्दा पनि भएन दास हुँदा पनि भएन आशमर्दा बढी भयो […]
शोषण र उत्पीडनको अन्त्य अत्याचारको समाप्ति ठिहि¥याउने गरिबीबाट मुक्ति त्यो अन्तिम युद्ध मानवीय जिन्दगीको उज्यालो आशा जे जति जडता र जे जति रुढता ती सबै सबैबाट फुत्कँदै चुँडाल्दै शताब्दीयौंदेखिका साङ्ला हिंडियो अँध्यारोसंगै बोलियो सपनाको बन्दुक भयभीत भइएन कहिल्यै पनि गरिएन माया आफ्नो साँघुरो जिन्दगीको गाइयो गीत भविष्यको अजङका पहाड भत्काइयो र बनाइयो सुन्दर बाटो जहाँ […]
निरन्तर क्रान्तिका पक्षमा ‘जीवन शर्मा संयुक्त सांस्कृतिक साँझ’
काठमाडौं । शुक्रबार साँझ राजधानी सहर काठमाडौंको राष्ट्रियसभा गृहमा इच्छुक सांस्कृतिक प्रतिष्ठानको आयोजनामा ‘जीवन शर्मा संयुक्त सांस्कृतिक साँझ’ कार्यक्रम भव्य रुपमा सम्पन्न भयो । लामो समयपछि रक्तिम सांस्कृतिक परिवार, सामना सांस्कृतिक परिवार र हास्य कलाकार सुबोध गौम एउटै मञ्चमा त्यो पनि साझा कार्यक्रम लिएर देखा परेका थिए । कार्यक्रममा प्रस्तुतिका हिसाबले जनवादी गायक जीवन शर्माको […]
झर्रोटर्रो : हे बरै…हे बरै….
हे बरै … हे बरै …२ माक्र्सले सोध्लान् नि, खै पुँजि भन्लान् – २ बेची खाए रे भन्दिए – २ एङ्गेल्सले सोध्लान् नि खै दर्शन भन्लान् – २ पतनै गरे रे भन्दिए – २ लेनिनले सोध्लान् नि, खै क्रान्ति भन्लान् – २ भ्रान्ति भयो रे भन्दिए – २ स्टालिन् सोध्लान् खै, राष्ट्रियता भन्लान् – २ […]
Email : newsmulbato[email protected]